Ubugcisa be-3D obunemiqolo engapheliyo yomtya oqulunqwe nguNimmalaikaew | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umculi waseThai oneminyaka engama-33 u-Uttaporn Nimmalaikaew upeyinta Imifanekiso ye-3D enemigca emininzi yentsimbi kunye nenethiwekhi eya kuthi ithathe ingqalelo yakho ngokujonga njengemifanekiso engumoya kwimpembelelo yokuqala abayivelisayo.
Obu buchule wabufumana ngengozi ngo-2001 xa, ngethuba wayefunda kwiYunivesithi yaseSilapakorn eBangkok, wabona indawo yepeyinti kumnatha wakhe weengcongconi. Kungekudala uNimmalaikawe wakuqonda oko kunokudala ukubonakala kobunzulu kunye nevolumu ngokudibanisa izaleko ezininzi zemisonto, njengoko esenza ngoku kwizindululo zakhe ezahlukeneyo zobugcisa esebenzisa obu buchule.
«Kwaqala ngepeyinti yedijithali yemigca emibini exutywe kwifom yomntu"Ucacisa uNimmalaikaew." Umzobo wedijithali uyashicilelwa ukubeka isiseko semilo kunye nobume. Iingqimba ezilandelayo zipeyintwe ngeoyile kwi- «tulle peystyle style». Ixesha elingaphezulu, ufundile ukuba olu hlobo lwepeyinti ludinga indlela eyahlukileyo yokwenza ukukhanya okuyinyani kunye nezithunzi zento leyo.
Uluhlu oluphezulu lunika iinkcukacha zokwenza i-optical illusion. Emva koko idibanisa umaleko ngamnye kunye nomgca wokushicilela Ukuqinisekisa ukuba yonke into inobume obufanayo kwaye iyakwazi ukwenza imvakalelo yobunzulu emfanekisweni.
Ezinye iziqwenga zobugcisa ezinomdla kakhulu isikhokele kukukhanya okungeyonyani, imifanekiso yesiporho ebonakala ngathi ayikho apho kunye nobuso babantu kunye namanani ahlala emile phambi kombukeli.
Lo mculi waseThai isisa kuloo 3D esiyifumana kwimiboniso bhanyabhanya, iikhompyuter kunye neekhonsoli ukuzama ukuyixelisa kumfanekiso wokwenyani ofana nalowo sabelana ngawo apha kwaye wasibeka phambi kwelo cebo alifumene ngengozi okanye ngethamsanqa, ngubani owaziyo.
Unayo iwebhusayithi yakho y facebook wakho ukusondela emsebenzini wakhe nakwiiprojekthi ezintsha, oko Ngokuqinisekileyo kuya kubakho kwaye baninzi, ngenxa yobudala bakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Igcisa laseThai lenza ubugcisa be-3D ngokupeyinta ngeendlela zomsonto kunye nomnatha